Muxamed Faarax oo ka qaybgelaya tartankii ugu dambeeyay kahor ciyaaraha Olombikada Rio + Sawirro – Gool FM
(London) 05 Luulyo 2016 – Mo Farah ayaa ka qaybgelaya tartankii ugu dambeeyay kahor difaacashadiisa billadihiisa Olombikada oo Rio ka bilaabmi doona, isagoo haatan isu diyaarinaya orodka 5,000 mitir ee ee Ciyaaraha Muller Anniversary Games oo bilaabmaya 23-ka Luulyo.
33-jirkan ayaa masaafadan ordaya markii ugu horreeysey tan iyo guushiisii Olombikadii London, wuxuuna heli doonaa fursad uu kula tartamo ragga billadda Rio ku haysta oo ay ka mid yihiin labada reer Ethiopia ee Muktar Edris iyo Yenew Alamirew iyo dhiggooda Kenya ee Thomas Longosiwa iyo Edwin Soi.
Farah, ayaa u gooyey ciyaaraha fudud ee Qaramada yurub todobaadkan ka bilaabmaya si uu diiradda u saaro orodka 5,000m iyo 10,000m ee Olombikada.
‘Inaan Olombikada ka tartamo waa wax cajiib ah mana sugi karo inaan ka qayb galo orodadda Sanad-guurada Muller ee London. Waxay noqon doontaa fursad aan iskugu diyaariyo Olombikada Rio. Waxaan doonayaa inaan taageerayaasha siiyo maalin ay xusuustaan.’ ayuu raaciyey.